Attila သည့်ဟွန် - Portraits
Attila သည့်ဟွန် Portraits
စာအုပ်အကျီ၏စုစည်းမှု Attila ညျဘုရားသခငျ၏ Scourge ဖေါ်ပြခြင်းကိုဖုံးလွှမ်း။
Image ကိုအိုင်ဒီ: 497940 Attila ဘုရားသခငျ၏ဘေး။ (1929) စာအုပ်တွင်အကျီ၏စုစည်းမှု; ဒီအဖုံးညျဘုရားသခငျ၏ Scourge Attila ဖေါ်ပြခြင်း။ NYPL ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပြခန်း
Attila သူ, သူ့လမ်းကြောင်းအတွက်အရာအားလုံးလုယူအရှေ့အင်ပါယာကျူးကျော်ပြီးတော့ Gaul သို့ရိုင်းဖြတ်ကျော်အဖြစ်ရောမတို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လုပ်ကြံသူ Huns အဖြစ်လူသိများသည့်လူရိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ပြင်းစွာသောအ 5th ရာစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, Attila ဘုရား၏ Scourge (flagellum dei) အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်။ သူလည်း Nibelungenlied နှင့်လန်စစ်ကိုင်းအတွက် Atli အဖြစ် Etzel အဖြစ်လူသိများသည်။
Image ကိုအိုင်ဒီ: 1102729 Attila, အ Huns / ဂျေချပ်မန်း, sculp ၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ (မတ်လ 10, 1810) ။ NYPL ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပြခန်း
Attila သူ, သူ့လမ်းကြောင်းအတွက်အရာအားလုံးလုယူအရှေ့အင်ပါယာကျူးကျော်ပြီးတော့ Gaul သို့ရိုင်းဖြတ်ကျော်အဖြစ်ရောမတို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လုပ်ကြံသူ Huns အဖြစ်လူသိများသည့်လူရိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ပြင်းစွာသောအ 5th ရာစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Attila သည့်ဟွန် 433 ကနေ Huns ရှငျဘုရငျဖွစျသညျ - 453 အေဒီသူအီတလီနိုင်ငံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမယ့် 452 အတွက်ရောမမြို့တိုက်ခိုက်ခြင်းကနေလြှော့ခဲ့သည်။
Attila နှင့် Leo
Raphael ရဲ့ "လီယိုမဟာနှင့် Attila အကြားအစည်းအဝေး" ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း။ ဝီကီပီးဒီးယား၏ယဉျကြေး။
အကြားအစည်းအဝေးတစ်ဦးကပန်းချီကား Attila သည့်ဟွန်နှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယို။
သူသေဆုံးပုံကိုအကြောင်းကိုရုံတစျခုထက် Attila သည့်ဟွန်အကြောင်းပိုမိုနက်နဲသောအရာရှိပါသည်။ နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Attila ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယိုသူများနှင့်ဆွေးနွေးပြီးနောက်, 452 အတွက်ရောမမြို့သို့အိတ်အားမိမိအစီအစဉ်အပေါ်ကိုပြန်လှည့်အကြောင်းပြချက်ဝန်းရံ။ ယော်ဒန်မြစ်သည် Gothic အဘိဓါန်သမိုင်းပညာရှင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးငြိမ်းချမ်းရေးရှာသူ့ကိုချဉ်းကပ်လာသောအခါ Attila ကွေကွောငျးကိုပြောပြတယ်။ သူတို့ကစကားပြောနှင့် Attila ကိုပြန်လှည့်။ ဒါပဲ။
"Attila ရဲ့စိတ်ကိုရောမမြို့ကိုသွားပေါ်ကွေးခဲ့။ သို့သော်သူ၏နောက်လိုက်များ, Priscus ပြောပြတယ်သမိုင်းပညာရှင်သကဲ့သို့မသောသူတို့သည်ရန်လိုသောခဲ့ကြသည်ဖို့မြို့အဘို့နှင့် ပတ်သက်. ထဲကသူ့ကိုပယ်ရှင်းပြီ, ဒါပေမဲ့သူတို့ Alaric, ယခင်ရှင်ဘုရင်၏အမှုကိုအောကျမေ့သောကွောငျ့ခဲ့သည် အဆိုပါ Visigoths ၏။ သူတို့ဟာ Alaric ရောမမြို့၏အိတ်ပြီးနောက်အသက်တာမရှည်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့် Attila ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွားမယ့်အကြားသံသယအတွက်အမ်းအမ်းနေစဉ်ထို့ကြောင့်ယခုဘဝ။ (223) ထွက်သွားကြချက်ခြင်းအဖြစ်လြောကျ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရှင်ဘုရင်၏ကောင်းသောကံကြမ္မာ distrusted, သူနေဆဲဒီကိစ္စကိုသုံးသပ်ဖို့ကာလအတန်ကြာတစ်ခုသံရုံးငြိမ်းချမ်းရေးရှာရောမမြို့ကနေသူ့ကိုသို့ရောက်ကြ၏။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယိုသည်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုအခါ Attila အလျင်အမြန်ဘေးဖယ်ထားတော်မူ၏။ မြစ် Mincius များ၏ကောင်းမွန်စွာခရီးထွက် Ford မှာ Veneti ၏ Ambuleian ခရိုင်အတွင်းရှိသူ့ကိုတွေ့ဆုံရန်ဆီသို့ရောက် လာ. , , ထိုအစ်မသည်သူ၏ထုံးစံအတိုင်းဒေါသအမျက်, သူညုကျော်လွန်ခြင်းမှချီတက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၏ဂတိနှင့်အတူထွက်သွားသည်လမ်းပေါ်ပြန်လှည့်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကို Honoria ကိုစလှေတျမဟုတ်လျှင်သူကအီတလီနိုင်ငံအပျေါမှာပိုမိုဆိုးရွားသောအရာတို့ကိုယူဆောင်လာလိမ့်မယ်လို့သူအပေါင်းတို့ထက်သူကြေညာခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်အတူ avowed ၏ တော်ဝင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု၏သူမ၏ကြောင့်ရှယ်ယာတွေနဲ့ဧကရာဇ် Valentinian နှင့်သြဂတ်စ Placidia ၏သမီး။ "
ချားလ်စ် C. Mierow အားဖြင့်ဘာသာပြန်ထားသောအဆိုပါ Goths ၏ Origins နဲ့လုပ်ရပ်တွေအတွက် Jordanes
မိုက်ကယ်အေ Babcock သည်မိမိ၌ဤဖြစ်ရပ်ကိုလေ့လာနေ Attila သည့်ဟွန်၏လူသတ်မှုဖြေရှင်းခြင်း ။ Babcock Attila အစဉ်အဆက်မတိုင်မီရောမမွို့ရှိခဲ့ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိမယုံကြည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူလောက်ကြီးစွာသောစည်းစိမ်ကိုလုယူဖို့ရှိခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိကြပြီ။ သူလည်းသူကလုံးဝနီးပါး undefended ခဲ့လူသိများကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကွာလှမ်းသွား၏။
Babcock ရဲ့အကြံပြုချက်များ၏အရှိဆုံးကျေနပ်များထဲတွင်အယူသည်းသူ Attila, သူရောမကိုထုတ်ပယ်တစ်ချိန်က Visigothic ခေါင်းဆောင် Alaric (ထို Alaric ကျိန်စာ) ၏ကံကြမ္မာမိမိအဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြောက်လန့်သောစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီတွင် 410 အတွက်ရောမမြို့ရဲ့အိတျပွီးနောကျ, Alaric မိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းအားမိမိစင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်အခြားအစီအစဉ်များပါစေနိုင်မီ, သူရုတ်တရက်ဆုံးသွားရှာတယ်။
Priscus တစ်အပိုင်းအစအပေါ်အခြေခံပြီး Mor သန်းရဲ့ပန်းချီ, "Attila ၏ပွဲ" ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း။ ဝီကီပီးဒီးယား၏ယဉျကြေး။
၏အဘို့ဆောင်သောပွဲ Attila Mor သန်း (1870) အဖြစ်, Priscus ၏အရေးအသားပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်ခြယ်။ အဆိုပါပန်းချီဘူဒါပက်အတွက်ဟနျဂရေီအမျိုးသားပြခန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကဗျာဆန်ဆန် Edda မှသရုပ်ဖော်ပုံအတွက် Atli (Attila သည့်ဟွန်) ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း။ ဝီကီပီးဒီးယား၏ယဉျကြေး။
Attila လည်း Atli ဟုခေါ်သည်။ ဤအကဗြာဆနျ Edda ထံမှ Atli ၏သရုပ်ဖော်ပုံဖြစ်ပါသည်။
မိုက်ကယ် Babcock ၏ The ည Attila သေမှာတော့သူကကဗျာဆန်ဆန် Edda အတွက် Attila ရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တစ် Atli အမည်ရှိလူကြမ်း, လူ့အသက်ကိုသတ်သောသူ, လောဘနှင့် fratricide အဖြစ်ကပြောပါတယ်။ အဆိုပါ Atlakvida နှင့် Atlamal ကိုခေါ် Attila ၏ဇာတ်လမ်း, ပြောပြသော Edda အတွက်ဂရင်းလန်းကနေနှစ်ခုကဗျာရှိပါတယ်; အသီးသီးတို့သည် Lay နှင့် Atli (Attila) ၏သီချင်း။ ဤအပုံပြင်များမှာတော့ Attila ရဲ့ဇနီး Gudrun, သူတို့သားသမီးဦးသေဆုံးသူတို့အားတက်ချက်ပြုတ်ရေး, သူ၏ဦးသေဆုံးပြီးသူမ၏ညီအစ်ကိုတို့, Gunnar နှင့် Hogni များအတွက်ကလဲ့စားချေအတွက်သူမ၏ခင်ပွန်းကသူတို့ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထိုအခါ Gudrun သေဆုံးသူများ Attila stabs ။
အဆိုပါ Chronicon Pictum အတွက် Attila ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း။ ဝီကီပီးဒီးယား၏ယဉျကြေး။
အဆိုပါ Chronicon Pictum 14 ရာစုဟန်ဂေရီကနေအလယ်ခေတ်ပုံ Chronicle ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံတူ Attila လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွက် 147 ပုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယိုမဟာတွေ့ဆုံ Attila ၏သေးသေးလေး။ 1360. Public Domain ။ ဝီကီပီးဒီးယား၏ယဉျကြေး။
၏အစည်းအဝေး၏နောက်ထပ်ရုပ်ပုံ Attila နှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယို, အ Chronicon Pictum ထံမှဤအချိန်။
အဆိုပါ Chronicon Pictum 14 ရာစုဟန်ဂေရီကနေအလယ်ခေတ်ပုံ Chronicle ဖြစ်ပါတယ်။ Attila ဒီပုံတူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အတွက် 147 ပုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သူသေဆုံးပုံကိုအကြောင်းကိုရုံတစျခုထက် Attila သည့်ဟွန်အကြောင်းပိုမိုနက်နဲသောအရာရှိပါသည်။ နောက်ထပ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Attila ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလီယိုသူများနှင့်ဆွေးနွေးပြီးနောက်, 452 အတွက်ရောမမြို့သို့အိတ်အားမိမိအစီအစဉ်အပေါ်ကိုပြန်လှည့်အကြောင်းပြချက်ဝန်းရံ။ ယော်ဒန်မြစ်သည် Gothic အဘိဓါန်သမိုင်းပညာရှင်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးငြိမ်းချမ်းရေးရှာသူ့ကိုချဉ်းကပ်လာသောအခါ Attila ကွေကွောငျးကိုပြောပြတယ်။ သူတို့ကစကားပြောနှင့် Attila ကိုပြန်လှည့်။ ဒါပဲ။ အကြောင်းပြချက်မရှိ။
မိုက်ကယ်အေ Babcock သည်သူ၏ Attila သည့်ဟွန်၏လူသတ်မှုဖြေရှင်းခြင်း၌ဤဖြစ်ရပ်ကိုလေ့လာတယျ။ Babcock Attila အစဉ်အဆက်မတိုင်မီရောမမွို့ရှိခဲ့ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိမယုံကြည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူလောက်ကြီးစွာသောစည်းစိမ်ကိုလုယူဖို့ရှိခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိကြပြီ။ သူလည်းသူကလုံးဝနီးပါး undefended ခဲ့လူသိများကြလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကွာလှမ်းသွား၏။
Attila သည့်ဟွန်။ Clipart.com
၏အက်ဒွပ်မျောက်လွှဲကျော်ရဲ့ဖော်ပြချက် Attila ရောမအင်ပါယာ၏ငြင်းဆိုရန်နှင့်ကျဆုံးခြင်း၏မှတ်တမ်းမှ, အတှဲ 4:
"သူ့ features တွေ, တစ်ဦး Gothic အဘိဓါန်သမိုင်းပညာရှင်များ၏လေ့လာရေးအတိုင်းမိမိအမျိုးသားရေးဇာစ်မြစ်၏တံဆိပ်ခေါင်းကိုဘှားမွငျသဖွငျ့ Attila ၏ပုံတူခေတ်မီ Calmuck ၏စစ်မှန်သောပုံပျက်သောထားပါတယ်; ကြီးမားတဲ့ဦးခေါင်းတစ်ခု swarthy အသားအရေ, အသေးစားနက်ရှိုင်း-ထိုင်မျက်စိတစ် တစ်ဦးအချိုးအစားမမျှတသောပုံစံသော်လည်းပြားချပ်ချပ်နှာခေါင်း, ဦးနှောက်အာရုံကြောအစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးမုတ်ဆိတ်, ကျယ်ပြန့်ပခုံးနှင့်တိုတောင်းတဲ့စတုရန်းလေးထောင့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရပျ၌အနည်းငယ်ဆံပင်, ။ အဆိုပါ Huns ၏ရှင်ဘုရင်၏မာနထောင်လွှားခြေလှမ်းနှင့်အရိပ်အထက်ကသူ့သာလွန်၏ဝိညာဏ်ထုတ်ဖော်ပြောဆို အဆိုပါသညျလူသားတို့အရာကြွင်းလေ; သူမှုတ်သွင်းတော်မူသောကြောက်မက်ဘွယ်သောအပျော်မွေ့လိုသေးသောဒီ Savage သူရဲကောင်းသနားဖို့လက်လှမ်းမမှီခဲ့ဘူးလျှင်အဖြစ်သူသည်ပြင်းထန်စွာသူ့မျက်စိလှိမ့်တစ်ဦးထုံးစံရှိ၏။ မိမိအတောင်းပန်ရန်သူများကိုငြိမ်းချမ်းရေးသို့မဟုတ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်၏အာမခံချက်၌ခိုလှုံခြင်းငှါ, ; နှင့် Attila သူစစ်နှစ်သက်သောတစ်ရုံနှင့်အလိုလိုကျလှနျးခွငျးမာစတာအဖြစ်သူ၏ဘာသာရပ်များအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ , သူရင့်ကျက်အသက်အရွယ်မိမိခေါင်းကိုထက်ထိုသူ၏လက်၌ပလ္လင်တော်တက်ပြီပြီးမှ, ဒါပေမယ့်, မြောက်ကိုရီးယား၏သိမျးပိုကျအောင်မြင်; နှင့် တစ်ဦးစွန့်စား s ကို၏ကျော်ကြားမှု oldier အသုံးဝင်သမ္မာသတိရှိသောနှင့်အောင်မြင်သောယေဘုယျ၏အဘို့ဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်။ "
Attila သည့်ဟွန်၏တွေဆီကနေ။ Clipart.com
Attila သူ, သူ့လမ်းကြောင်းအတွက်အရာအားလုံးလုယူအရှေ့အင်ပါယာကျူးကျော်ပြီးတော့ Gaul သို့ရိုင်းဖြတ်ကျော်အဖြစ်ရောမတို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လုပ်ကြံသူ Huns အဖြစ်လူသိများသည့်လူရိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ပြင်းစွာသောအ 5th ရာစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရောမအင်ပါယာ၏ငြင်းဆိုရန်နှင့်ကျဆုံးခြင်း၏သမိုင်းအနေဖြင့် Attila ၏အက်ဒွပ်မျောက်လွှဲကျော်ရဲ့ဖော်ပြချက်, အတှဲ 4:
Attila မြေပုံ။ ပြည်သူ့ဒိုမိန်း
Attila နှင့် Huns ၏အင်ပါယာဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးကမြေပုံ။
Attila သူတို့, သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတွက်အရာအားလုံးလုယူအရှေ့အင်ပါယာကျူးကျော်ပြီးတော့ Gaul သို့ရိုင်းဖြတ်ကျော်အဖြစ်ရောမတို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လုပ်ကြံသူ Huns အဖြစ်လူသိများသည့်လူရိုင်းအုပ်စုတစ်စု၏ပြင်းစွာသောအ 5th ရာစုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Attila နှင့်သူ၏အစ်ကို Bleda ၎င်းတို့၏ဦးလေး Rugilas ထံမှ Huns ၏အင်ပါယာအမွေဆက်ခံသည့်အခါကကက်စပီယန်ပင်လယ်ဖို့အဲလ်ပ်တောင်တန်းနှင့်ဘောလ်တစ်ကနေတိုးချဲ့။
441 ခုနှစ်တွင် Attila Singidunum (ဘဲဂရိတ်) ဖမ်းမိ။ 443 ခုနှစ်တွင်သူသည်ညု, ထို့နောက် Naissus (NIS) နှင့် Serdica (ဆိုဖီယာ) ရက်တွင်မြို့ရွာဖျက်ဆီးခံရနှင့် Philippopolis ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သူသည် Gallipoli အတွက်ဧကရာဇ်တပ်ဖွဲ့များဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ သူကနောက်ပိုင်းမှာအဖြစ်ဝေး Thermopylae သကဲ့သို့, ဘော်လကန်ပြည်နယ်များမှတဆင့်နှင့်ဂရိနိုင်ငံသို့သွားလေ၏။
အနောက်ဘက်တွင် Attila ရဲ့ကြိုတင်မဲအရှေ့ပိုင်းပြင်သစ်နိုင်ငံ, Chalons သို့မဟုတ် Troyes အတွက်ဖြစ်ဖို့ထင်, အ Catalaunian Plains (Campi Catalauni) ၏ 451 တိုက်ပွဲမှာ check လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အောက်မှာရောမနှင့် Visigoths ၏တပ်ဖွဲ့များ Aetius နှင့် Theodore ငါသာအချိန်များအတွက် Attila အောက်ရှိ Huns လုပ်ကြံ။
Tipu Sultan, Mysore ၏ကျား
ပထမ 12 ရောမဧကရာဇျ (ထို "ကဲသာ") ၏ဘဝအသက်မှာတစ်ဦးကမျှော်
ရှေးဟောငျးအီဂအိုလံပစ် - ဂိမ်းများ, ထုံးတမ်းများနှင့်စစ်ဆင်ရေး
ပါဝါမှဟစ်တလာရဲ့ထ၏တစ်ဦးက Timeline ကို
အဆိုပါဧကရာဇ်နှင့်အီတလီ၏ဥက်ကဋ်ဌ: 1861 မှစ. 2014 ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိ
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Cooch ရဲ့တံတား၏တိုက်ပွဲ
Play တွင်ဘောလုံးကို: အဘယျအ Term နည်းလမ် (စည်းကမ်းများအဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူ)
အဆိုပါ Term "Rough" ဟုဂေါက်ကွင်းအပေါ်ရည်ညွှန်းအဘယ်အရာကိုနားလည်ခြင်း
Alum ကို Safe ဖြစ်သနည်း အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်
အီတလီရိုးရှင်းသော preposition အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အကောင်းဆုံးငေ trolls Motors က
ဘက်တီ Shabazz ကိုယ်ရေးဖိုင်
အီတလီမှာ "စီးပွားရေးနဲ့" ဟုအဆိုပါကြိယာ Conjugate လုပ်နည်း
Comparing ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အရည်အသွေး: နှင်းလျှောစီးအဝတ်အစားသည်စျေးဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဘင် Hogan: အဂေါက်သီးဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ဇီဝ
အဆိုပါ Gamma ရာထူးအမည်ဟာဘာလဲ,
မရဏအကြောင်းထိပ်တန်း 10 ရော့ခ်သီချင်းများ
ဥက္ကလာဟိုးမား GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
တစ်ဦးရုပ်ပြစာအုပ် Panel ကိုဆိုတာဘာလဲ
ဂျာမန်ခိုင်ခံ့သောကြိယာ - Irregular ဂျာမန်ကြိယာ Conjugating